13 Mar, 2015 - 13:03	 2015-03-13T13:39:21+00:00 2015-03-13T13:39:21+00:00 0 Views
Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe, ndinoshanda muHurumende uye ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana mumwe ane makore 18-27. Anoda ngaandibate pa 0715 100 712.
Ndiri mukadzi ane makore 42, ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 47 kusvika 55. Asina utachiona ngaandibate pa0718 141 788.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana mumwe ndiri kutsvaga murume ane makore 35-40 anoda kundiroora. Anoenda kuchechi ngaandibate pa0776 052 542.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 28 uye ndiri kutsvagawo murume anondiroora. Ngaave ane makore anotangira pa30 zvichienda mberi. Ndinoda akamboroora asina mukadzi uye asiri muchirongwa, anoshanda. Ini ndine vana asi handigari navo, ndakafirwa nemurume anondida ngaandibate pa0776 207 209.
Ndiri mukomana ane makore 22 uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 ari HIV negative. Ngaave mutsvuku akanakisisa kana mushava anopfeka saizi 28 yejean. Anondida nhare yangu 0715 472 008.
Ndiri musikana ane makore 18 uye ndiri kutsvagawo mukomana ane makore 20-26 anoda zvekuroora. Nhamba yangu 0737 199 372.
Makasimba here? Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1, ndiri kutsvagawo murume ane makore 35 ari HIV positive. Anondida ngaafone pa0783 325 964.
Makadii? Ndiri kunyorera nguva zhinji asi ndiri kushaya anondinzwisisa. Ndiri murume ane makore 44 uye ndoda mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 42. Ndinoda ane mwana kana asina anoda kuroorwa. Nhamba yangu 0772 512 708.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 37 nevana vaviri uye ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuvaka imba. Ndapota ngaave ari pachokwadi nekuti ndaneta nematsotsi. Nhamba dzangu 0777 645 875.
Ndiri mukadzi ane vana vaviri makore 36 ndinotsvaga murune ane makore 39 – 50 anoziva Mwari. Nhare yangu 0776 612 543.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 45 zvichikwira. Kana pane andifarira anondibata pa0737 089 003.
Makadiiko veKwayedza? Iini ndiri mukomana asina wake ndotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 22 nekuti ini ndine makore 24. Chero mukadzi ane mwana 1 ndinomuda, nhare yangu 0713 952 458.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1, ndiri HIV negative uye ndinoda murume ane makore 40 kusvika 50 akafirwa ari HIV negative. Ndinoda anonamata, kunyanya kumasowe. Ndatenda hangu, nhamba yangu 0782 287 349.
Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvaka musikana ane makore ari pasi peangu anobva kuMasvingo. Ngaave ari pachokwadi anoda kugara kumusha nokuti ini ndinoshanda kumusha. Anondibata pa0716 934 129.
Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 39 chete. Vane vakadzi kwete, ndoda anoshanda ane mwana kana vana vake. Nhamba yangu 0718 141 883.
Ndine makore 32 ndinotsvagawo mukadzi akanaka mutate, mutsvuku. Andifarira anofona pa0777 497 915 kana kundibata paWhatsApp, kunyanya vekuKadoma.
Makadii henyu veKwayedza? Ndishambadzeiwo, ndiri murume ane 31 ndodawo mukadzi ane makore ari pasi peangu ane mwana 1. Ini ndine mwana mumwe chete. Ndinozevenza payadhi, asina chirwere ngaandibate pa0778 387 223 kana paWhatsapp.
Ndiri musikana ane makore 20 ndinodawo mukomana ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 30. Ari HIV negative seni ngaandibate pa0777 113 078.
Makadini henyu veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana 1, ndinoda murume ane makore 30 – 40. Ndiri mukadzi mupfupi, akasimba mushava asi varume vevanhu kwete. Nhamba yangu iyi 0716 392 034.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22. Anoda anondibata pa0777 006 578.
Ndiri jaya rine makore 25, ndiri kutsvagawo mukadzi wemakore 23 zvichidzika anoda zverudo. Ndiri HIV negative uye ndinoputa fodya. Nhamba dzangu 0736 961 067.
Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa ndinodawo musikana ane makore 24 zvichidzika. Ini handishandi, ndinoda anobva kwaMutare. Andida anondibata pa0716 763 437.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvaga musikana ane makore 18 – 19. Nhare yangu 0771 499 702, ndinoda asina chirwere.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndinotsvakawo mukadzi anondida ari positive. Vakadzi vevanhu kwete. Nhamba dzangu idzi 0715 530 222, ndinogara kuZvishavane.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2, ndinoda murume ane makore 50 zvichidzika. Nhamba yangu 0717 116 752.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2 ndinoda murume anodawo zvemba. Nhare dzangu idzi 0717 116 752.
Ndotsvagawo mukadzi ane mwana mumwe anonamata akanaka uye akadzidza nekurongeka. Ini ndine makore 38 nemwana mumwe. Handidi anodhakwa, nhare yangu 0774 619 082.
Ndiri murume ane makore 39 ndinoda mudzimai akanaka akarongeka ane makore 25 kusvika 33. Ini ndine makore 39 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Vakarongeka chete ndibatei pa0774 619 082.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwana 1 ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anonamata kuJohane Masowe yeChishanu ane makore 45 – 50. Ndiri HIV positive asi handitaridzike kurwara. Anonwa mapiritsi seni ngaandibate pa0779 877 090.
Ndinokutenda veKwayedza ndakawana wandaida saka vose vachiri kufona pa0775 978 249 chiregai henyu nekuti zvangu zvakaita.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 kusvika 18 anoda imba. Ndinobva kwaMusana kuBindura, vanoda fonai pa0777 713 471.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinodawo musikana akanaka asinganyadzise anogara muHarare. Andifarira ngaandibate pa0778 410 043.
Ini ndakawana chitekete changu cheGweru, makaita basa veKwayedza. Ini naNyarai weGweru takadanana nekupfimbana. – S Madzinga, Kariba.
Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 30 zvichikwira. Ari pachokwadi ngaandibate pa0771 426 001.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 3, ndinoshanda kuJoni uye ndinotsvagawo murume ane makore 35 -50 asina mukadzi ane zvaanoitawo muhupenyu. Ngaave ari HIV negative, vane vakadzi chimbopaiwo vamwe mukana. Nhare yangu +27 612 402 799.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21 ndinodawo musikana wekufara naye. Nhare yangu 0776 615 838.
Ndinotsvagawo mukomana ane makore 24 zvichidzika anoda zvekuroora. Ini ndine makore 18, ngaave anoshanda akanaka uye anogeza. Ndiri mutete mushava, andifarira ari pachokwadi ngaandibate chero ipi nguva pa0776 147 292.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 22-21. Ndiri Accountant uye ndinogara ndega. Anenge andifarira ngaandibate pa0777 079 241.
Ndiri murume ane makore 35, HIV negative uye ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 25 kusvika 30 ari pachokwadi. Ari negative nhamba dzangu idzi 0712 350 514.
Makadii? Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 24-26 anoshanda kana muHurumende. Ini ndiri ticha kwaMutare. Rumwe ruwoko rwangu rwakaremera asi runoshanda. Ndiri HIV negative uye ndakazvipira kutorwa ropa. Ndinoda munhu ari pachokwadi, anoda nezvangu ngandibate pa0782 957 078.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 asina zvirwere. Ndinoda kunyanya anogara kuManicaland asi vekune mamwe matunhu munotenderwawo. Nhamba dzangu 0777 431 241.
Ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 30. Ini ndine makore 36 uye ndinogara kwaMutare. Nhamba dzangu idzi 0773 770 023.